July 1, 2020 - Khitalin Media
အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများ ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ
July 1, 2020 Khitalin Media 0
သက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများ ဖတ်ဖို့ပါ ညီမလေးရေ…….. လှပတဲ့ မျက်နှာ တစ်ခုက တစ်ချိန်ကျရင် အိုမင်းသွားလိမ့်မယ် …။ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းတွေကလည်း တစ်ချိန်ကျရင် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ် … ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမကောင်း တစ်ယောက်ကတော့ […]
နောကျကြောတကျ ဇကျကွောတကျ လကျပွငျငုတျ အုံးလှဲနသေူမြားအတှကျ နာရီပိုငျးအတှငျး ပြောကျတဲ့ နညျးလေးပါ
နောက်ကျောတက် ဇက်ကြောတက် လက်ပြင်ငုတ် အုံးလွဲနေသူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့ နည်းလေးပါ အဆင့် (၁) ခြေစုံရပ် ခါးကို မတ်မတ်ထား လက်နှစ်ဖက်ကို နဖူးပေါ်တင် ခေါင်းကို နောက်လှန်နိုင်သလောက် လှန်ဖိထားပါ။ ခါးမပါသွားပါစေနဲ့။ ၁၀ စက္ကန့်ရေပြီး ပြည့်ရင် ဖြည်းဖြည်း လွှတ်ပါ။ အဆင့် (၂) […]
သားအမိနှဈဦးရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ အပွုံးပီတိတို့နဲ့ မိသားစုပွနျလညျဆုံစညျးတဲ့နေ့ (ရုပျ သံ)
သားအမိနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အပြုံးပီတိတို့နဲ့ မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့နေ့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနုဟာ ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့မှာ ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မတိုင်မီ မိခင်ဖြစ်သူပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာ မင်းသန့်မောင်မောင်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပြီး အပြုံးပီတိတို့နဲ့ မိသားစုပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့နေ့လေးဟာ တကယ့်ကိုလှပနေပါတော့တယ်။ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မေသန်းနု . . . ပရိသတ်ကြီးရေ […]
စိတ်ပင်ပန်း ဖိစီးလွန်းလို့ဖြစ်တဲ့ နောက်ကျော နာကျင်မှုများကို သက်သာစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း(၅)မျိုး
စိတ်ရော လူပါ ပင် ပန်း တာ များ လာ တဲ့ အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ နာကျင်မှုတွေ ဖြစ် တတ် ပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းမှု ထက် ၊ စိတ်ပင်ပန်းမှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုတွေက သက်သာဖို့ပိုခက်ခဲတတ်ပြီး ပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို […]
အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သုံးစွဲနေကြတဲ့ အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ ပရုပ်လုံးအဆိပ်အကြောင်း..
အမှုအမှတ်မဲ့သုံးစွဲနေကြတဲ့ အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ပရုပ်လုံးအဆိပ်အကြောင်း (အထူးသတိထားကြပါ)။ Naphthalene ပရုပ်လုံးကို ဘာနှင့်ပြုလုပ်ပါသလဲ။ ကြားဖူးတာကကလေး အသုံးဆောင် အဝတ်စားထည့်ရင် သွေးကင်ဆာ ဖြစ်တက်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ ဖြစ်တက်ကို ဖြစ်တတ်လို့ပြင်ရမယ်။ Naphthalene ကိုကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံတို့ကနေ ထုတ်လုပ်တယ်။ ပလပ်စတစ်၊ ရေဆင်ဓါတ်ပေါင်း၊ လောင်စာဆီနဲ့ ဆိုးဆေး ထုတ်လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ […]
(၁၇) ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁၅၀၀၀ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ
(၁၇) ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁၅၀၀၀ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ ထူးလိုက်တဲ့ ကံ ဆုကြီး ၂ ထပ်ကွမ်း ကုသိုလ်ကံ အင်မတန်ကောင်းလွန်းပါတယ်… သင်္ချာ နည်းနဲ့လာတွက်ကြပါလား ? ဖြစ်နိုင်ချေရှိရဲ့လား…? လောကမှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိ ကံတရားဆန်းကြယ်ပုံများ…. အောင်ဘာလေ (11)ကြိမ်မြောက်မှာ သိန်းတစ်သောင်း အခုလ (17)ကြိမ်မြောက်မှာ သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် […]
(၇) ရက်သားသမီးများ အတွက်…၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန်များ
(၇) ရက်သားသမီးများ အတွက်… ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ဗုဒ္ဒဟူး သားသမီးများ […]
(၁၇)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ ထီပေါကျစဉျတိုကျလို့ရပီနျော
(၁၇)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁ဝဝဝတန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး ကံထူးရှင်များဖြစ်ကြပါစေ (၁၇)ကွိမျမွောကျ ကပျြ ၁ဝဝဝတနျ အောငျဘာလေ ထီပေါကျစဉျတိုကျရနျ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီး ကံထူးရှငျမြားဖွဈကွပါစေ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ထီပေါက်စဉ် edit လုပ်ပီး အစ/အဆုံး တင်ပေးပါမည် like/share ထားပါ သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု ည ၈၅၃၀၉၅ သိန်းတစ်သောင်းဆု […]
(၁၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား တိုက်ရိုက်Live လွှင့်တင်ဆက်မှု သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး ကံထူးရှင်များဖြစ်ကြပါစေ (၁၇)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားအား တိုကျရိုကျLive လှငျ့တငျဆကျမှု သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီး ကံထူးရှငျမြားဖွဈကွပါစေ (၁၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား တိုက်ရိုက်Live လွှင့်တင်ဆက်မှု သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး ကံထူးရှင်များဖြစ်ကြပါစေ (၁၇)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားအား တိုကျရိုကျLive လှငျ့တငျဆကျမှု သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီး ကံထူးရှငျမြားဖွဈကွပါစေ